Heshiisyadii La Dhammeeystiray Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Maanta – Garsoore Sports
Heshiisyadii La Dhammeeystiray…
Asc aqriste soo dhowoow, suuqa kala-iibsiga cayaartooyda ee xagaaga wuxuu furmay 9kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay waxaana uu suuqa xirmi doonnaa 31ka bisha Ogoosto ee sannadkan 2021.
Haddaba waxaan warbixintan idinkula wadaageeynaa wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta maanta hadalheyso ee suuqa kala iibsiga ah iyo waliba saxiixyadii ay kooxuhu dhammeeystireen.
HESHIIS DHAN: Kooxda Arsenal ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa daaficii kooxda Benfica Nuno Tavares (Halkan ka aqriso faahfaahinta)
HESHIIS DHAN: Inter Milan ayaa ku garaacday Manchester City saxiixa da ’yarka reer Ireland Kevin Zefi, sida laga soo xigtay Football Insider.
16 jirka garabka ka ciyaara ee Shamrock Rovers ayaa ogolaaday heshiis seddex sano ah oo uu kula joogo kooxda ka ciyaarta Serie A.
Manchester United iyo PSV Eindhoven ayaa horay loola xiriirinayay inay u dhaqaaqayaan da’yarkan tayada leh.
HESHIIS DHAN: Bayer Leverkusen ayaa xaqiijisay saxiixa goolhayaha Russia Andrey Lunev oo ay ka saxiixdeen heshiis labo sano ah.
HESHIIS: Barcelona ayaa ogolaatay heshiis ay cayaaryahan Carles Alena uga iibineyso Getafe maadaama ay doonayaan qarash dhimis balaaran iyo in cayaaryahanno badan ay iska iibiyaan xagaagan si ay u hubiyaan inay heshiis cusub ka saxiixan karaan Lionel Messi.
WARARKA KALE EE UGU WAAWEEYN SUUQA MAANTA
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa doonaya in kooxdiisa ay si dhaqso ah ugu dhaqaaqdo saxiixa weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Haaland, sida ay qortay jariirada Bild.
Manchester United ma qorsheyneyso inay cayaartooy ku beddelato weeraryahanka Tottenham Harry Kane sida uu qorayo Express Sport
Juventus ayaa kor u qaadi doonta isku daygeeda ay kula soo saxiixaneyso Manuel Locatelli, iyadoo bartimaameedkan ay ka gudbineyso dalab 40 milyan oo ginni oo ku aaddan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sassuolo iyo xulka Talyaaniga (La Gazzetta dello Sport).
Arsenal ayaa sare u qaadday dalabkeeda ku aaddan daafaca Brighton & Hove Albion, Ben White iyadoo dooneeysa inay 48 milyan ginni oo lagu daray 6 milyan oo dheeri ah u gudbiso kooxdiisa xilli dalabkoodii duubduubka ahaa ee 50ka milyan aan weli lagasoo jawaabin, sida ay qortay The Star.
Emerson Palmieri oo loo sheegay inuu ka tegi karo kooxda Chelsea ayaa diiradda u saaran kooxaha Napoli iyo Roma, laakiin Calciomercato ayaa sheegaya in kooxaha ka dhisan Serie A-da aysan diyaar u aheyn inay bixiyaan qiimaha 20ka milyan ginni ee lagu dalbanayo.
Felipe Anderson wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda Lazio, xiddiga kooxda West Ham ayaa mari doona tijaabada caafimaadka sabtida markaasoo uu ka bixi doono diiwaanka kooxda reer London. (Sky Sport Italia, Sportitalia iyo Tuttomercatoweb).
Weeraryahankii hore ee Argentina Carlos Tevez ayaa helay seddex dalab si uu xirfaddiisa ugu dhammeysto horyaalka MLSka mareykanka-ka kaddib markii uu ka tagay kooxda Boca Juniors. (ESPN)
Emile Smith Rowe ayaa iska diidi doona xiisaha Aston Villa isla markaana qandaraas cusub oo 5 sanno ah u saxiixi doona kooxdiisa Arsenal, sida ay qortay Birmingham Mail.
Lionel Messi Oo Argentina Kula Guuleeystay Koobkiisii Ugu Horreeyay Abid + Sawirro